Namuhla Emlandweni: 8 Okthoba 1938 Ankara-Sivas-Erzurum - RayHaber
IkhayaJIKELELENamuhla emlandweni: umugqa we-8 Okthoba 1938 Ankara-Sivas-Erzurum
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş JIKELELE, TURKEY, Namuhla emlandweni 0
I-8 Okthoba 1892 Ilungelo lomzila ozoxhuma ne-Thessaloniki-Mitrovica line-station eKarasulu ukuqala i-Firecik futhi idlule iKomotini neDrama yanikezwa kuFrance uRene Bauda-uy, owayengumngani wase-Istanbul. 1 Okthoba Umzila owaqala ngo-1893 1 wagcwaliswa ngo-Ephreli 1896.
8 Okthoba 1908 Umthetho wesikhashana on Strike ukhishwe.
8 Okthoba 1938 Umzila we-Ankara-Sivas-Erzurum ufinyelele ku-Erzincan.
I-8 Okthoba i-1945 Erzurum ne-Sivas izitimela zihlangene. Abantu abangu-40 bafa.
Namuhla Emlandweni: 8 Okthoba 1938 Ankara-Sivas-Erzurum line yafinyelela ku-Erzincan. 08 / 10 / 2012 8 Okthoba 1892 Ukuvunyelwa komugqa ozoxhuma neSeranik-Mitrovica emgwaqeni eKarasulu ukuqala i-Firecik futhi kudlule iKomotini neDrama yanikezwa iFrance uRene Bauda-uy, ongumbhanki e-Istanbul. 1 Okthoba Umzila owaqala ngo-1893 1 wagcwaliswa ngo-Ephreli 1896. 8 Okthoba 1908 Umthetho wesikhashana on Strike ukhishwe. 8 Okthoba 1938 Umzila we-Ankara-Sivas-Erzurum ufinyelele ku-Erzincan. I-8 Okthoba i-1945 Erzurum ne-Sivas izitimela zihlangene. Abantu abangu-40 bafa.
Namuhla Emlandweni: 8 Okthoba 1938 I-Ankara-Sivas-Erzurum linefika ku-Erzincan 08 / 10 / 2015 Umlando Namuhla 8 Okthoba 1892 Ukuvunyelwa komugqa ozojoyina iStrekki-Mitrovica esiteshini saseKarasulu ukuqala e-Firecik bese udlula iKomotini neDrama yanikezwa iFrance uRene Bauda-uy, ibhange lase-Istanbul. 1 Okthoba Umzila owaqala ngo-1893 1 wagcwaliswa ngo-Ephreli 1896. 8 Okthoba 1908 Umthetho wesikhashana on Strike ukhishwe. 8 Okthoba 1938 Umzila we-Ankara-Sivas-Erzurum ufinyelele ku-Erzincan. I-8 Okthoba i-1945 Erzurum ne-Sivas izitimela zihlangene. Abantu abangu-40 bafa.
Namuhla Emlandweni: 8 October 1938 Ankara-Sivas-Erzurum line ... 08 / 10 / 2016 Umlando Namuhla 8 Okthoba 1892 Ukuvunyelwa komugqa ozojoyina iStrekki-Mitrovica esiteshini saseKarasulu ukuqala e-Firecik bese udlula iKomotini neDrama yanikezwa iFrance uRene Bauda-uy, ibhange lase-Istanbul. 1 Okthoba Umzila owaqala ngo-1893 1 wagcwaliswa ngo-Ephreli 1896. 8 Okthoba 1908 Umthetho wesikhashana on Strike ukhishwe. 8 Okthoba 1938 Umzila we-Ankara-Sivas-Erzurum ufinyelele ku-Erzincan. I-8 Okthoba i-1945 Erzurum ne-Sivas izitimela zihlangene. Abantu abangu-40 bafa.
Namuhla kumlando: i-20 Juni 2003 iyona yokuqala ye-Erzurum Express esebenza kumugqa we-Ankara-Erzurum ... 20 / 06 / 2012 I-20 Juni 2003 Umzila we-Erzurum Express, ogijima kulayini we-Ankara-Erzurum, unwetshiwe ku-Kars.
Namuhla Emlandweni: 20 Juni 2003 Erzurum Express kumgqa we-Ankara-Erzurum 20 / 06 / 2015 Umlando Namuhla 20 Juni 2003 Umzila we-Erzurum Express, osebenza kulayini lwe-Ankara-Erzurum, unwetshiwe ku-Kars.
Namuhla Emlandweni: 8 Okthoba 1938 Ankara-Sivas-Erzurum line yafinyelela ku-Erzincan.
Namuhla Emlandweni: 8 Okthoba 1938 I-Ankara-Sivas-Erzurum linefika ku-Erzincan
Namuhla Emlandweni: 8 October 1938 Ankara-Sivas-Erzurum line ...
Namuhla kumlando: i-20 Juni 2003 iyona yokuqala ye-Erzurum Express esebenza kumugqa we-Ankara-Erzurum ...
Namuhla Emlandweni: 20 Juni 2003 Erzurum Express kumgqa we-Ankara-Erzurum
Namuhla Emlandweni: 23 November Umzila wezitimela ze-1938 ufike ku-Erzincan.
Namuhla emlandweni: 23 November 1938 umzila wesitimela ufike ku-Erzincan ...